UNicholas Carr wenze umsebenzi omuhle ekwakheni ukufana phakathi kokuvela kwegridi yamandla kagesi kuleli kanye nokuzalwa kwe-computing yamafu. Encwadini efanayo, iWired inendatshana enhle, ebizwa ngePlanet Amazon, kushicilelo lwayo lwangoMeyi 2008 elitshela indaba yefu lase-Amazon. Qiniseka ukuthi uyayihlola. Izintambo zibhekise ekunikezelweni kwe-Amazon njenge-Hardware njengesevisi (HaaS). Yaziwa nangokuthi Ingqalasizinda njengesevisi (IaaS).
Njalo lapho sifunda ikhasi lombhalo noma sichofoza isixhumanisi noma sibuka ividiyo, ngaso sonke isikhathi lapho sifaka okuthile enqoleni yokuthenga noma senza usesho, ngaso sonke isikhathi lapho sithumela i-imeyili noma sixoxa efasiteleni lokuthumela imiyalezo ngokushesha, siyagcwalisa ngendlela “yerekhodi.” … Sivame ukungazi ngemicu esiyiphothayo nokuthi isetshenziswa ngobani futhi. Futhi noma ngabe besazi ukuthi sizogadwa noma silawulwa, kungenzeka singenandaba. Kakade, siyazuza nasekwenzeni samuntu i-Intanethi eyenza kube nokwenzeka — kusenza abathengi nabasebenzi abaphelele. Samukela ukulawula okukhulu ngokubuyisela okulula. Ubulembu besicabucabu benziwa ukukalwa, futhi asijabuli ngaphakathi.
zokukhwabanisa futhi isilawuli angamazwi aqinile kakhulu engingavumelani nawo. Uma ngikwazi ukusebenzisa idatha yamakhasimende ukuzama ukubikezela ukuthi bangahle bafune ini, angibalawuli noma ngibaphathe ngokuthenga. Esikhundleni salokho, ngenzela ukuhlinzeka ngemininingwane, ngizama nje ukubanikeza lokho okungenzeka ukuthi bakufunayo. Lokho kusebenza kahle kubo bonke abathintekayo.
Ukulawula kuzokhombisa ukuthi isikhombimsebenzisi ngandlela thile siyinqobile inkululeko yami yokuzikhethela, okuyisitatimende esingenangqondo. Sonke singamaZombi angenangqondo akwi-Intanethi angenawo amandla okuzivikela esikhangisweni sombhalo esibekwe kahle? Ngempela? Kungakho izikhangiso ezihamba phambili zisathola kuphela amanani wokuchofoza amadijithi owodwa.
Ikhono lokweqa usebenzisa ikhibhodi nokuqapha bese 'ungena' ku-Intanethi akuyona into ecasulayo kimi nhlobo. Ngiyakwazi ukukuqonda lokho isilawuli igama elisetshenziswa ngokukhululeka futhi, kubantu, alisoze laba ngokoqobo. Asikaze sikwazi ukuzilawula - futhi imishini eyenziwe ngabantu ayisoze yakwazi ukunqoba umshini ophelele uNkulunkulu awuhlanganisile.
IBig switch ifundwe kahle futhi ngingakhuthaza noma ngubani ukuthi ayithathe. Ngicabanga ukuthi imibuzo ephakamisa ubuhlakani bokuzenzela besikhathi esizayo mihle, kepha uNicholas uthatha umbono othusayo ngaleli thuba kunombono onethemba lokuthi izokwenzani ngokusebenzisana kwabantu, ukukhiqiza kanye nekhwalithi yempilo.